Apple dia nanaparitaka tranga AirPods vaovao miaraka amin'ny fifindrana tsy misy tariby sy maro hafa | Avy amin'ny mac aho
Ny iray amin'ireo fiarovana mafy an'i Apple dia ny indostrian'ny mozika. Tsy ho an'ny Apple Music na ny mpandahateny HomePod ihany, fa ho an'ny iray amin'ireo fahombiazana farany farany: ny AirPods. Ny kabary tsy misy tariby Apple dia iray amin'ireo fitaovana ilain'ny mpanjifa indrindra. Ny kinova faharoa dia efa havoaka miaraka amin'ny fanatsarana efa nambara. Na izany aza, Apple dia tsy mitsahatra mamorona ary efa nanaparitaka tranga famandrihana vaovao ho an'ireo headphone ireo.
Hatreto dia fantatra - na heverina - fa ny maodely AirPods manaraka dia hitovy. Ny hany zavatra mety hiova raha ny momba ilay maodely tany am-boalohany izay efa teny an-tsena nandritra ny fotoana ela dia ny fiampangana azy ireo dia azo averina tsy misy vidiny. Izany hoe ho avy miaraka amin'ny haitao Qi. Na izany aza, tao amin'ny patanty farany hita, boaty vaovao no mety ho eny an-dalana.
Ao amin'ny patanty dia hita fa eo akaikin'ny mpandahateny ny boaty famerana ny AirPods; mandefa feo tsy misy tariby, sns. Raha ny fahitana azy, ity patanty vaovao ity dia manondro ny AirPods sy tranga iray izay mety ho mpandray tsy misy tariby ho an'ny loharanom-peo hafa. Izany hoe azo ampifandraisina amina mpandahateny amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo misy azy io, ary manomboka milalao mozika ilay mpandahateny.
Ary koa, ny iray amin'ireo fiasa izay nahitantsika tena mahaliana dia ny hoe rehefa mampiasa ny AirPods ny mpampiasa, dia afaka mandefa dian-peo tsy misy ilana tariby ny raharaha. Ary mahaliana izany satria Loharano iray izay tsy manana fahaizana mandefa feo tsy misy tariby dia azo ampifandraisina amin'ity fitaovana famandrihana ity —Haintsika atao ohatra ny manao MP3 mpilalao mahazatra na kapila mangidy ivelany miaraka amin'ny tranombokim-baovao voatahiry.
Ankehitriny, toy ny mahazatra ireo olana rehetra ireo, dia azo inoana fa ity patanty ity dia mijanona ho hevitra iray fotsiny amin'ny an'i Apple. Etsy ankilany mampahatsiahy anao izahay fa, hoy i Bloomberg, ny kinova tsy misy tariby ary mahazaka hamandoana mbola ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple dia manaparitaka tranga AirPods vaovao miaraka amin'ny fifindrana tsy misy tariby sy maro hafa
Tadiavo ny teny miafin'ny Wi-Fi noho ny fampiharana Keychains ao amin'ny Mac anao